Uvavanyo lwee-Xiaomi AirDots zentloko | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Uvavanyo lweentloko zeXiaomi AirDots
URafa Rodríguez Ballesteros | | Izaziso
Namhlanje sibuya nee-headphone ezingenazingcingo, kodwa hayi nayiphi na. Ekugqibeleni Sifumene ii-AirDots ezilindelwe kakhulu ezivela kwiXiaomi. Esinye sezixhobo esidale okona kulindelweyo kunako ukubanako. Kodwa nakwixabiso esinokuzifumana ngalo kwaye nathi enkosi ngokuba ngumfundi we-Androidsis Ungafumana isaphulelo esibalulekileyo njengoko kuchaziwe ngezantsi.
Akunakuphepheka ngalo lonke ixesha sithetha ngee-headphone ukuzithelekisa nezona zidumileyo kwintengiso. Kwaye nangona ngokwasemzimbeni bengafani kwenye into ngaphandle kokuba babelana ngombala omnye. Ii-AirPods zika-Apple ziya zisanda ukufumana izimbangi enamandla ngakumbi ukulwa.
1 Ii-AirDots ngokuchasene nazo zonke
2 I-aesthetics yangoku kunye nembonakalo
3 Ezi ziiAirDots
4 Amava okumamela kakuhle
5 Ukusebenza kobude ukukhuphisana ne-AirPods
6 Iinkcazo zobugcisa
Ii-AirDots ngokuchasene nazo zonke
Xa ndinonikwa i ukukhula kunye nodumo olukhulayo olufunyenwe nguXiaomi kwiminyaka yakutshanje kuyinto eqhelekileyo ukuba nganye yokukhutshwa kwakho iphakamisa umdla omncinci. Njengoko sisazi, ukongeza kwii-smartphones eziwonga amabhaso, uXiaomi akayeki ukwenza izixhobo kunye nezinto ezikumgangatho kunye nexabiso elifanelekileyo.
Ukuqala kula maziko kusengqiqweni ukuba Ii-headphone zeBluetooth ezenziwe nguXiaomi ziba yinto enqwenelekayo kubalandeli abaninzi benkampani. Kwaye kwi-Androidsis sibe nethamsanqa ngokwaneleyo ukuba sikwazi ukubavavanya, kwaye njengesiqhelo, sikuxelele ngokweenkcukacha ukuba sifumanise ukuba banjani. Ukuba awukwazi ukulinda ukuba nabo zithenge ngoku ngokunqakraza apha elona xabiso libalaseleyo usebenzisa i-BHADots coupon coupon.
I-aesthetics yangoku kunye nembonakalo
Kwiinyanga ezimbalwa sibonile ukuba njani Ikhathalogu yee-headphone ezingenazingcingo iphindaphindeka ngaphandle kokuma. Kodwa oku kuyasinceda ukuba sahlule amabakala ahlukeneyo ngokulula ngokomgangatho kunye nokusebenza. Ii-AirDots zeXiaomi ngokungathandabuzekiyo zezona zibalaseleyo kuzo zombini, ukusebenza kakuhle kunye nomgangatho wokwenziwa.
Ukuba ujonga ubuhle kunye nokubonakala komzimba iboniswe ziiAirDots sikwabona umsebenzi olungileyo ovela kwiXiaomi. Sifumene iseti yentloko nge uyilo ngononophelo. Ukusuka kwibhokisi yetshaja ukuya kwii-headphone ngokwazo. Zombini izinto ziyafana Okweqanda okweqanda kwaye iyafana Umbala omhlophe. Yenziwe ngeplastikhi esemgangathweni kunye nokumelana okuhle ubunzima bayo obuncinci buyamangalisa.
Ibhokisi kunye netshaja ine I-gloss igqibile phezulu, evala ngokugqibeleleyo enkosi ngozibuthe. Ngomnxeba omnandi ogqityiweyo kwi-matte emazantsi, ngenene kulula ukuphatha epokothweni. Ubungakanani kunye nobunzima obungaqapheli ukuba sizithwele. Emuva kwayo sifumana Isinxibelelanisi sokutshaja seMicro encinci.
Ii-headphone zinendlela efanayo yokuqwalaselwa. Uyakuthanda kakhulu ukubona iinkcukacha zolu hlobo, ngakumbi kwizixhobo ezinamaxabiso afikelelekayo. Kungenxa yoko le nto sifumana kwifayile ye- phezulu, ibiya kuba yeyiphi ngaphandle kwendlebe umphezulu omenyezelayo. Umphezulu wokuchukumisa apho sinokunxibelelana ngokusekwe kumaqhosha esitshixo.
Kwiifowuni ezinokusinika dlala okanye ume kancinci ukudlala umculo, chola okanye uxhome umnxeba. Kwaye sinako nokuba biza umncedisi welizwi kuGoogle yee-smartphones zethu. Kwinxalenye ejonge ngaphakathi endlebeni sibona ukuba ukupheliswa kukwimeko emhlophe kanjani. Sifumene Izikhonkwane ezihambelana nezo zikwibhokisi.
UXiaomi ukhethe ukuxhobisa ii-AirDots nge ifomathi yendlebe. Kwaye ukuze amava okumamela abe ngoyena mntu sinokufikelela kuye iiseti ezintathu zeepads ngobukhulu obahlukeneyo. Iseti yentloko apho indlela ezibekwe ngayo ibaluleke ngokwenene ukuze sonwabe ngokupheleleyo kumgangatho womculo abasinika wona.
Ukuba uqinisekile ngeeAirdots zithenge apha kwiGearVita elona xabiso libalaseleyo. Kwaye kunye ne-BHADots coupon coupon ixabiso lakho liya kuba sezantsi kakhulu!
Njengoko besiphawulile ngamanye amaxesha ngezinye ii-headphone, kuyancomeka ukuba uyilo kunye nokumila okufanayo kuyaqala. Ngamanye amagama, ubume bayo "abuphefumlelwanga" nangazo naziphi na ezinye ii-headphone ezivela kwifemu ethile eyaziwayo. Ukuvela kwexabiso kuxabisekile kwaye kuyangqinwa kwakhona ukuba Ukukopa imveliso eyimpumelelo akufani nempumelelo. Ngamanye amaxesha kuye kuchasane.
Amava okumamela kakuhle
Ngokuchasene noko sinokucinga xa sijonga imilo yee-AirDots, indlela echanekileyo yokunxiba indlebe kufuneka ibe tye. Yindlela apho iipads zilunge ngakumbi kumngxunya wendlebe. Kwaye le yindlela esikwazileyo ukufumana elona zinga liphezulu lesandi. Yintoni egqithisile, Nangona bengenasinciphiso sengxolo, ukubekwa bucala kwezandi zangaphandle kulungile kakhulu.
Xa sele sibekwe kakuhle ezindlebeni zethu kufuneka sitsho inqanaba levolumu lingcono kunokuba bekulindelwe. Ngaphandle kwamathandabuzo, ii-AirDots zikwindawo ephezulu, ngokomthamo, kuzo zonke ii-headphone zolu hlobo esele silivavanyile ukuza kuthi ga ngoku. Ukuba uyawuthanda umculo ongxolayo, iXiaomi ikunika enye indlela elungileyo.
Apha ungathenga iXiaomi AirDots nge- $ 30.99 kuphela nge-coupon ye-BHADots
Ngokuchasene noko, kuba indawo ekuyo yenza imakrofoni kude nomlomo. Amava okufowuna ayisiyiyo eyona ilungileyo. Nangona sinxiba ii-headphone sithandaza umnxeba ngokugqibeleleyo. Umntu okwelinye icala ubona ilizwi lethu ngomgama ongaphezulu kunoko unqwenelekayo, kwaye ngenxa yoko unomsindo ophantsi kakhulu.
Ukusebenza kobude ukukhuphisana ne-AirPods
Ukongeza kuyilo olukhankanywe apha ngasentla, esicinga ukuba luyimpumelelo yokwenyani, Ii-AirDots zibonelela ngetekhnoloji yakutshanje ngexabiso elingenakubekwa. Njengolu hlobo lwesixhobo, ezi ntloko zinetekhnoloji Iifayile zenyani Stereo. Enkosi ngayo, zilungelelaniswe ngokuzenzekelayo ukubonelela ngesona sandi sikumgangatho ophezulu.
Ukuqhagamshela kwisixhobo sethu kuya kufuneka siyivule ibhokisi kuphela. Xa ususa ii-headphone kuye Sele zinxibelelene ne-smartphone yethu kwaye singadlala umculo okanye senze iminxeba. Y xa zifakwa ebhokisini, zinqunyulwa ngokuzenzekelayo kwaye zilayishiwe. Ukuthuthuzela, ukusebenza kwaye intle kakhulu.
Ukuba ujonga ibhetri yayo, ii-AirDots zeXiaomi zinokungasebenzi kakuhle. Ngokomvelisi, zabo I-40 mAh inikezela iiyure ezingama-6 zobude bexesha ukuba enyanisweni baphantsi kakhulu. Ibhokisi yakho Itshaja ine-300 mAh ukwazi ukunika ukuya kuthi ga kwi-7 imijikelezo epheleleyo yentlawulo. Ngakumbi kwe iiyure ezilishumi elinambini zokusetyenziswa siza kuba ne-100% Ngeyure enesiqingatha yentlawulo.
Fi kelela 10 mitha
format Ukuphicothwa ngaphakathi
Amaqhosha okudlala kwakhona Ngaphezulu
Ibhetri yentloko 40 mah
Ibhokisi yebhetri-itshaja 300 mah
Ubukhulu X x 2.3 1.4 1.3 cm
U bunzima 99.8 g
Ixabiso 52.03 €
Ikhonkco lokuthenga Ii-AirDots
Uyilo olulungileyo kunye nezixhobo
Ubunzima bokukhanya okungathethekiyo
Isandi somgangatho kunye namandla evolumu
Isinxibelelanisi se-Micro USB
Ukutshaja intambo imfutshane kakhulu
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Uvavanyo lweentloko zeXiaomi AirDots
I-Oukitel K12, ene-10.000 mAh ibhetri, iya kufika kwintengiso ngoJuni